Video: Miss ASEAN TV Charming 2011 Beauty Pageant | Myanmar Celebrity Gossip & News
Video: Miss ASEAN TV Charming 2011 Beauty Pageant
This is the video of Myanmar Contestants, Thandar Nwe and Awn Seng, who entered the competition of Miss ASEAN TV Charming 2011 Beauty Pageant which was held on 12 March 2011 at Ho Chi Minh City, Vietnam. Myanmar Model, Thandar Nwe won the Miss Talent Award at the Beauty Contest. Miss Brunei Putri Norizah Binti Ibnoriza was Crowned Miss ASEAN TV Charming 2011 in this Beauty Pageant. Video on Youtube!!!
Video of HTV9
emo.March 21, 2011 at 11:44 AMှု ကချင်မလေးအောန်ဆိုင်းရေ...ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ReplyDeleteeMarch 21, 2011 at 6:29 PMDear Admin of Myanmar Celebrity,Thanks for Miss Asean show and also kindly upload Miss Christams 2010 show held at Traders Hotel in Yangon, Myanmar.ReplyDeletechochoMarch 21, 2011 at 9:18 PMဒီလို..ပွဲကြီးတွေမယ်....လိုအပ်တဲ့ စကားကို..အင်္ဂလိပ်...လို ကောင်းကောင်း ပြောနိုင်ဖို့ လိုတယ်.. တို့နိုင်ငံမယ်..နောက်လာမယ်..ကလေးတွေအတွက်..အခြေခံ ပညာရေးစနစ် ကောင်းဖို့...အများကြီးလို့အပ်တယ်....ReplyDeleteshunMarch 21, 2011 at 9:42 PMဟုတ်တယ်သူများတွေကအင်္ဂလိပ်လိုမွှတ်နေတာပဲကိုယ့်မြန်မာကငပိသံနဲ့ဆိုတော့ရှက်ဖို့ကောင်းပါတယ်မြန်မာဆိုတာဘယ်ဘာသာစကားကိုမဆိုပီသအောင်ပြောနိုင်တယ်ဆိုတာကမ္ဘာကသိအောင်ပြဖို့လိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ဂုဏ်ယူပါတယ်အင်္ဂလိပ်စာကောင်းဖို့လေးပဲလိုပါတယ်မြန်မာမယ်တွေကိုMiss Universeပွဲတွေမှာပါဝင်ပြိုင်စေချင်ပါတယ်အဲ့လိုပြိုင်ခွင့်ရအောင်လဲကြိုးစားစေချင်ပါတယ်ရင်ထဲကဆန္ဒပါအားပေးနေမယ်မြန်မာReplyDeleteJonathanMarch 21, 2011 at 11:36 PMYes ! i want to sayalittle words to for this moment , I proud Myanmar congratulation for miss Thanda Nwe I proud you to got this miss best talent 2011 Asia television show .Then i want to suggestion to all myanmar modle to what is you're need to learn? you may know if you seen this video, all of you'er very attractive lady in the world level, but you have to can say what you want to say all of speech , briefly each of individual Myanmar model you have to learn English speaking , I wishes and I hope all Myanmar models future to more can get award for miss or beauty any competition in the World.ReplyDeleteNyan LinMarch 22, 2011 at 2:18 AM@JonathanPls try to write correctly by yourself first. no offence! justaobjective commentReplyDeletewanMarch 22, 2011 at 3:09 AMvietnam doesn't recognize new myanmar flag,they used the old 1 :PReplyDeleteMayMarch 22, 2011 at 6:47 AMProud of Myanmar ethnic (Kachin ma lay)thanks for your show which isapart of Myanmar culture in Vietnam.ReplyDeleteciinMarch 22, 2011 at 6:23 PMProud of Myanmar,especially chin ma lay.....her dance is rlly gud.thx!!!ReplyDeletezarniMarch 22, 2011 at 7:49 PMWhatever they say I am very proud of Myanmar lady!!!ReplyDeletemariaMarch 22, 2011 at 9:09 PM@Jonathanအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတာ အမှားတွေမှ အများကြီးပဲနော်။ ဘာကိုဆိုလိုမှန်းတော့ သဘောပေါက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူများကို အကြံဥာဏ်ပေးဖို့အဆင့်လောက် မရောက်သေးဘူးလားလို့..ReplyDeletechitlunlayMarch 23, 2011 at 3:19 AMFeel ကိုတောင် fee လို့ သူကပြောသွားတယ်နော်ဒါကိုများဒို့ မြန်မာတွေက အာဆီယံမှာ English pronunciationအကောင်းဆုံးလို့ ထင်တဲ့လူလည်းရှိတယ်နော်...ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်အားပေးဒယ်ReplyDeletepeternawMarch 23, 2011 at 4:15 PMawn sengehkum ne ne lola hkat jang mung la hkat gaReplyDeletekkMarch 23, 2011 at 8:06 PMOh my Myanmar still poor in English ...but any ways u try ur best .... keep it up Myanmar lady...ReplyDeletemalaymoreMarch 24, 2011 at 7:11 AMမြန်မာမှန်ရင် အင်္ဂလိပ်စကားမပြောချင်လို့ပေါ့ မြန်မာ့နည်းမြန်မာံဟန်ဆိုတော့လေReplyDeletezinminlattMarch 24, 2011 at 12:47 PM2010တုန်းကလုပ်သွားတဲ့ပွဲလေးကိုလည်း..တင်ပေးပါအုံးကြည့်ချင်လို့ပါ..မြန်မြန်လေးရှာပီးတင်ပေးပါအုံးနော်ReplyDeletezinminlattMarch 24, 2011 at 12:52 PMတို့မြန်မာတွေဒီအင်္ဂလိပ်စာကိုသင်လာတာသူငယ်တန်းကနေဆယ်တန်းအထိပဲ..ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှကောင်းကောင်းမပြောတတ်ဘူး..ဒါဘာကိုပြလည်းဆိုတော့သင်ပုံသင်နည်းမှားနေတယ်ဆိုတာကိုပြနေတာပါပဲ...စစချင်းကြည့်တော့တော်တော်လေးရှက်မိတယ်...ဒါပေမဲ့ဗီယက်နမ်ကတတီယ..ရသွားတဲ့မယ်ကသန္တာနွယ်ထက်ပိုးဆိုးနေတယ်..အင်္ဂလိပ်လိုတစ်လုံးမှကိုမပြောတာ..top 5ထဲမှာပါတယ်..သူနဲ့ယှဉ်ပီးဖြေလိုက်ပါတယ်ReplyDeletezinminlattMarch 24, 2011 at 12:56 PMအမှန်တကယ်ဆိုရင်အင်ဒိုနီရှားကမယ်ကသန္တာနွယ်နဲ့ဆုအတူတူမရသင့်ဘူး.ဘာလို့လည်းဆိုတော့အဲ့မယ်ကခြေကားယားလက်ကားယားကပီးရသွားတာ..ဘာမမမှခက်ခက်ခဲခဲမကလိုက်ရဘူး..လွယ်လွယ်လေး..လူတိုင်းကတတ်တယ်အဲ့လို...မာရီနာ(သန္တာနွယ်)ကတော်တော်လေးလည်းကောင်းတယ်..တော်တော်လည်းကျင့်လိုက်ရမယ်ထင်တယ်..မလွယ်ဘူးလေအဲ့လိုကဖို့ဆိုတာ..အင်းပေါ့လေ.ဒိုင်တွေကဆုံးဖြတ်ဆိုတော့လည်းဘာမှမပြောတော့ပါဘူးReplyDeletezinminlattMarch 24, 2011 at 12:58 PM၂၀၁၀တုန်းကချစ်သုဝေနဲ့ရေဗက္ကာဝင်းဝင်ပြိုင်တာ..ရေဗက္ကာဝင်းက charming faceဆုရတယ်...မာ၇ီနာက the best of talent ဆုရတယ်ဆိုတော့ဒို့နိုင်ငံအတွက်ဂုဏ်ယူပါတယ်ReplyDeletezinminlattMarch 24, 2011 at 1:02 PMဒိုင်တွေလည်း..မျှတအောင်ထင်တယ်..တစ်နိုင်ငံကိုအနည်းဆုံး..တစ်ဆုတော့ပေးတယ်..ဟီးးးးးးးအာဆီယံအချင်းချင်းဆိုတော့လည်း...အဲ့လိုပဲလုပ်ရတော့တာပေါ့...နောက်ပီးအဲထဲမှာအိမ်ရှင်ဆုသေချာပေါက်တစ်ခုရမယ့်ဟာပါတယ်...ဘာဆုလည်းဆိုတော့voteအများနဲ့ပရိတ်သတ်အကြိုက်ဆုံးမယ်ဆုတဲ့..သေချာတယ်လေ..အိမ်ရှင်မယ်တစ်ယောက်ယောက်ပဲရမှာပေါ့..အဲ့ဆုကထည့်နေသေးတယ်..ဒို့မြန်မာအိမ်ရှင်လုပ်ကလဲ့ကျရင်...ဆုတွေသိမ်းကျုံးယူနိုင်ပါစေ..ReplyDeletemyoMarch 24, 2011 at 1:08 PMသန္တာနွယ်ကအင်္ဂလိုမပြင်လာတော့ဒီလိုဖြစ်တာပေါ့..နဲနဲတော့ကျက်ထားသင့်တယ်..ဒါပေမဲ့နားလည်ပေးနိုင်ပါတယ်..ကိုယ်သာဆိုရင်အဲ့လိုတောင်ထွက်မှာမဟုတ်ဘူး..ရှိန်ပီးတော့လေReplyDeletemyoMarch 24, 2011 at 1:11 PMတတီယ..ရတဲ့ဗီယက်နမ်ကမယ်ကလုံးဝကိုအင်္ဂလိုပ်မပြောတာဆိုတော့သန္တာနွယ်ကသူ့ထက်သာပါတယ်..အမှန်တကယ်သူကလည်းပူထူသွားတာနေမှာ..စင်ပေါ်မှာဆိုတော့လေ...ပီးတော့..သူကပထမဆုံးပြောတာဆိုတော့လေ...စစချင်း..တစ်ယောက်ချင်းစီတင်ဆက်တဲ့အပိုင်းမှာသူအင်္ဂလိုပ်လိုပြောပီးမိတ်ဆက်ထားတာ..ရှိတယ်..နောက်ဆုံးလုံးဝမရရတော့ရင်..တောင်အဲ့ဒါလေးကိုပြောခဲ့သင့်တယ်ReplyDeletechitlunlayMarch 26, 2011 at 6:18 AME လိုပြောလိုက်ရင် microphone ရေစိုသွားမှာ စိုးလို့ ဒဲ့E လိုပြောလိုက်ရင် microphone ရေစိုသွားမှာ စိုးလို့ ဒဲ့E လိုပြောလိုက်ရင် microphone ရေစိုသွားမှာ စိုးလို့ ဒဲ့ReplyDeleteKhaiboihMarch 27, 2011 at 12:11 AMWoow! it`s nice.. But I don`t liked the way they do likedaThailand!ReplyDeletefunnyMarch 27, 2011 at 2:17 PMအားပေးပါမဝေဖန်နဲ့....ReplyDeleteMingMarch 28, 2011 at 5:44 PMShe is pretty, cute sexy, perfect body great was good but why one Myanmar model can't speak English, really i am sad about for her English and She'll need to study much more English .ReplyDeleteMr. KoeMarch 30, 2011 at 9:01 AMဒို့ မြန်မာတွေများများပညာတတ်ကြပါစေ.. တော်ပြီးသားအရည်အချင်းရှိပြီးသားတွေမို့ ပိုပြီးထက်မြက်လာအောင်အားပေးကြပါ ဝိုင်းကြဝန်းကြပါ တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်သူများကလည်း မိမိကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိုမငဲ့ကွက်ဘဲ ပညာရေးကို ဖိဖိစီးစီးလေး အားပေးကြပါလို့ ဘဲမှတ်ချက်ပေးပါရစေ.......ReplyDeleteKyiMarch 30, 2011 at 3:36 PMEach comment has at leastagoodwill to improve English language level in Burma which isagood sign. It would have been nicer if one of the other models who speaksalittle more fluently than Thandar Nwe was the first. I am not sure if they favored Burma, or on purpose in order to take her points down. The jury normally know who the participants are and who have potentials to win top prize. I believe Thandar Nwe knew what to say but unexpected call and stage-fright made her lost to recite what she planned. Anyways, well done.ReplyDeleteOliviaApril 20, 2011 at 5:00 PMOMG whatashame:(terrible terrible. better she speak burmese and let someone translate.ReplyDeleteNoel NayApril 26, 2011 at 6:46 PMOMG... Thandar Nwe...very horrible english you spoke...I agreed on Olivia's comment...ReplyDeleteAdd commentLoad more...